आगामी बजेटमा ‘महिलासँग राज्य’ कार्यक्रम आउँछ : उपाध्यक्ष डा.पौडेल « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
८ जेष्ठ २०७९, आईतवार १३:५०
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले महिलासँग राज्य कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट ल्याउने योजना रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले महिला हकहित र सिर्जना भएका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभयो ।
आगामी वर्षको बजेटमा वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षा, भत्ताका कार्यक्रम बढाउँदै लैजाने योजना रहेको उहाँको भनाई छ । आगामी कार्यक्रममा विपन्न, असहाय र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकालाई सहायता दिने योजना रहेको भन्दै उहाँले यस्ता कुरामा विवाद गर्न जरुरी नरहेको बताउनुभयो ।
उपाध्यक्ष पौडेलले अर्थमन्त्री राजनीतिक दलको भएकोले पनि राजनीतिक दलका एजेण्डामा रहेर बजेट आउने बताउनुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको छ ।
जेठ १० गते मंगलवार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा १० खर्ब ४९ अर्ब, पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । यो बजेटका लागि करिव ८५ प्रतिशत स्रोत आन्तरिक राजश्व र ऋण र करिव १२ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट व्यहोरिने जनाइएको छ ।
आगामी बजेटडा. विश्वनाथ पौडेल